Manan-Jo Hanana ny Fiainany Manokana koa Ireo Mpijery Tranonkala “Ho an’Olondehibe” — Fa Iza No Mba Miaro Azy Ireo? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2016 8:57 GMT
Tsy mila Sary Vetaveta. Sary azon'ny rehetra ampiasaina, avy amin'ny Pixabay.
Tamin'ny volana Septambra, nahazo ary namoaka adiresy mailaka, anarana mpiserasera sy tenimiafina an'arivony an'ireo mpiserasera voasoratra anarana amin'ny tranonkala mampiseho votoaty sary vetaveta ny mpijirika iray tsy fantatra anarana, izay fanitsakitsahana goavana ny zo hanana fiainana manokana an'ireo mpiserasera.
Araka ny filazan'ny BBC sy loharanom-baovao hafa, nangalarina tamin'ny tranonkala antsoina hoe Brazzersforum tamin'ny taona 2013 ny tahiry, saingy tamin'ny Septambra 2016 vao navoakan'ity mpijirika ity izany vaovao antserasera izany, izay manitsakitsaka ny zo momba ny fiainana manokan'ny mpiserasera. Mizara sary sy lahatsary vetaveta amin'ny fomba ara-dalàna ho an'ny mpanjifa mandoa vola ny Brazzersforum sy ny Brazzers, manana ny foibeny ao Canada.
Tsy ny anaran'ny mpiserasera sy ny tenimiafina ihany no zavatra voantohintohina. Nitatitra ny gazety The Independent fa ny famafàna tahiry no nahatonga ny fahafahana niditra tamin'ny resaka manokana sy ny fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny maha-mampiseho sary mety manafintohina ny hafa azy.
Toa nivoaka tokoa avy tao amin'ny tranonkalan'ny Brazzersforum, izay niresahan'ireo mpijery momba ny seho sy ny mpandray anjara ankafizin'izy ireo ny zava-misy navoaka.
Na dia azo heverina fa mandefitra sy tsy miaro tsara ny zon'ny mpanjifany aza ny politikan'ny fiainana manokana ao amin'ny tranonkala. Araka ny hita amin'ny ampahany eto ambany, dia manan-jo hizara “izay vaovao manokana” nangoniny tamin'ny “olona mpikambana sy tsy mpikambana” ny orinasa:
Amin'ny fampiasan'ny mpamandrika ny tranonkala, manaiky mazava ny mpamandrika fa azon'ny tranonkala atao, raha tiany ny mizara, mamboraka, mamindra, manofa, manome alalana na mivarotra ny mombamomba manokan'ireo mpanjifa izay nangoniny tamin'ireo olona mpikambana na tsy mpikambana.
Mandraka ankehitriny, mbola tsy nisy mpanaramaso ny fiainana manokana – araka ny hahaizantsika tsara azy – nanameloka ampahibemaso ny ampamoaka na nanao fanadihadiana mikasika ny raharaha.
Tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena sasany tahaka ny ao Meksika ny famindràna tahiry manokana raha tsy misy ny fankatoavana an-tsoratra, indrindra raha tahiry saro-pady momba ny fironana amin'ny firaisana ara-nofo. Manana lalàna mifehy ny famindrana tahiry manokana ihany koa ny Vondrona Eoropeana ary mitaky fepetra manokana raisina rehefa misy ny famindrana natao. Ao Canada, izay misy ny Brazzers, ny Lalànan'ny mombamomba manokana sy ny Fiarovana ny Antontan-kevitra Elektronika dia mitaky amin'ireo orinasa manangona tahiry manokana mba hamoaka izay fomba hampiasàna ny tahiry tahaka izany, ary manome fanazavana mazava amin'ireo mpiserasera mba hisorohana ny fanitsakitsahana ny fiainana manokan'izy ireo. Saingy tsy mandamina tanteraka ny fomba famindrana ny tahiry manokana na saro-pady izany.
Herintaona teo ho eo talohan'ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana ao amin'ny Brazzers, tamin'ny Jolay 2015, nangalatra tahiry avy amin'ny rafi-tambajotra sosialy ho an'ny olon-dehibe antsoina hoe Ashley Madison ny vondrona antsoina hoe ‘The Impact Team’ ary nanao lasibatra ireo olona manambady na vita vodiondry (fombafomba) ary mikasa hanitsakitsa-bady. Nanoratra tao amin'ny Guardian i Tom Lamont tamin'ny fiandohan'ity taona ity fa midika fiporitsahan'ireo anarana mpiserasera maherin'ny 30 tapitrisa ny fahavakisan'ny [tranonkala] Ashley Madison:
Enim-bolana izay no namoahan'ireo mpijirika ny anaran'ireo olona 30 tapitrisa nampiasa ny Ashley Madison tranonkala hanaovana fanitsakitsaham-bady. Fametraham-pialàna, fisaraham-panambadiana ary famonoan-tena no naterak'izany.
Vao haingana indrindra, tamin'ny 14 Novambra 2016, nitatitra fijirihana kaonty maherin'ny 412 tapitrisa tao amin'ny tranonkala natokana ho an'olondehibe Friend Finder Networks ihany koa ny Guardian, manamarika ny fijirihana faharoa nihatra tamin'izy ireo tao anatin'ny herintaona mahery monja, ary iray amin'ireo fahavakisan-dahatahiry lehibe indrindra mbola tsy nisy toy izany, araka ny filazan'ny orinasa mpanaramaso ny Loharanom-baovao Tafaporitsaka.
Ahoana indray ny zon'ireo mpilalao sarimihetsika ho an'ny olon-dehibe?
Tamin'ny taona 2011,nanao fanadihadiana ny Fikambanana Ara-pitsaboana ho an'ny Olon-dehibe, fikambanana ao Etazonia izay nanao fitiliana SIDA sy aretin'ny firaisana ara-nofo (MST) tamin'ireo mpilalao arimihetsika vetaveta fa mety niharan'ny fahavakisan-torohay ihany koa ny antontan-kevitra ara-pitsaboana ho fanomezam-baovao ho an'ny tranonkala iray antsoina hoe Pornwikileaks.com. Nanome ny anarana, daty nahaterahana sy adiresin'ireo mpilalao sarimihetsika ho an'ny olon-dehibe ity tranonakala ity, maro amin'izy ireo no mety miatrika famaizana na valifaty avy amin'ny fianakaviana, namana sy mpampiasa azy ireo ankehitriny izay mahafantatra fa miasa amin'ny orinasa hafa izy ireo.
Jeffery Douglas, mpisolovava amin'ny toeram-pitsaboana, nilaza hoe:
Heloka bevava ao California avokoa ny fidirana amin'ny angon-tahiry hanaovana fikasan-dratsy, ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana ara-pitsaboana ary ny fanaovana takalo mindrana
Ankoatra ny famoahana ny tahiry manokan'ireo mpiserasera tranonkala ho an'ny olon-dehibe, mampiseho tsy fahampian'ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny mpanjifan'ny tranonkala manana fisiana manerantany ihany koa ny fanitsakitsahana ny zo hanana fiainana manokana antserasera. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, mety misalasala hampiaka-peo ireo mpiserasera lasibatra, mba hisorohana izay mety ho famoahana fanampiny na fahafaham-baraka rehefa avy navoaka ny fifandraisana an-tserasera sy ny fironana ara-nofon'izy ireo.
Azia Afovoany sy Kaokazy 13 ora izay
Afrika Mainty 2 herinandro izay